Ny vehivavy no tena voamafy noho ny hamehana ara-pahasalamana hoy ny Cnfm - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Lavitry ny laharam-pahamehan’ny mponina ny politikan’ny mpitondra il y a 3 jours
Nampizara ny Malagasy ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananan-tany il y a 3 jours
Petite pêche en péril: Madagascar signe des accords de pêche destructeurs avec des investisseurs chinois il y a 4 jours
Fanjakana tsara tataka ! il y a 4 jours
Zary lasa fampandriana adrisa fotsiny ilay ezaka lazaina ho hatao il y a 4 jours
Nanolotra soso-kevitra amin’ireo fahefana mpanapa-kevitra eto amin’ny firenena mba hitsinjovana sy hiarovana ny zon’ny vehivavy, indrindra ireo tsy manana mpiaro ny Conseil National des Femmes de Madagascar (CNFM) noho ny fisian’ny valan’aretina covid 19, izay misy fiantraikany mafy eo amin’ny lafiny sosialy sy ara-toe-karena, nandritra ny valan-dresaka nataon’izy ireo tamin’ny mpanao gazety ny zoma 9 oktobra 2020 tao Antananarivo.
« Hita sy tsapa fa ny vehivavy no tena mizaka ny tsy eran’ny aina noho ny fahaverezana asa sy ny tsy fisian’ny vola miditra, fitomboan’ny faharefoan’ny vehivavy, fahasahiranana manoloana ny fampianaran-janaka, ny tsy fanjarian-tsakafo, ny tsy fahafahana manara-maso ny fahasalamana, ny fiakaran’ny trangan’ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy ao an-tokantrano », araka ny voalazan’ny Cnfm tamin’ny alalan’i Andriamasy Marie Estelle, filohan’ny fikambanana.
Ny Governementa sy ireo tompon’andraikitry ny minisitera isan-tsokajiny dia tokony mampiditra ny mira lenta any amin’ny politika fanarenana aorian’izao covid 19 izao sy amin’ireo ambaratonga rehetra famolavolana ny teti-bola mba tena hisy fiantraikany amin’ny vehivavy tokoa ny politika fanarenana amin’izao krizy izao ary ny teti-bola izay ho laniana eto amintsika dia mba hampihena ny elanelana misy eo amin’ny lahy sy ny vavy mba hisian’ny tsy fanavahana.
Tokony hamafisina ny fahaiza-manaon’ireo minisitera, sy ny sampandraharaham- panjakana, ireo olom-boafidy isan-tokony, sy ireo tompon’andraikitra mpamolavola sy mpanantanteraka ny teti-bolam-panjakana mikasika ny famolavolana teti-bola mitsinjo ny mira lenta, izay antoky ny fitovian’ny lahy sy ny vavy ary indrindra koa izany dia ahafahana miroso amin’ny fanjakana tsara tantana sy ny fampandrosoana maharitra.
Mba havondrona amin’ny ivotoerana iray ireo vaovao sy tolotra ara-pamatsiam-bola ho an’ny tetik’asa mba ho fampahaleovan-tena ny vehivavy. Tokony hamoraina ny fepetra ahafahan’ny vehivavy sy ny fikambanam-behivavy misitraka ireny famatsiam-bola ireny mba hanarenana azy ara-toekarena.
Tokony hamafisina araka izany ny fahaiza-manaon’ireo fikambanam-behivavy misehatra eto amin’ny firenena mba hanana ny fahaiza-manao ahafahany manantanteraka ny iraka ataony sy mamaly ireny tolotra famatsiam-bola na ara-tetik’asa ho fanatsarana ny farim-pianan’ny vehivavy ireny.
Manoloana ny drafitra fanarenana ara-toekarena dia mangataka izy ireo:
- mba hodrafitra mitsinjo ny mira lenta izany ka mba hisy lamina ara-bola sy ara-teknika mamporisika ny fandraharahan’ny vehivavy.
- fanofanana ara-teknika sy arak’asa fohy azon’ny vehivavy rantovina mba hananan’izy ireo fahaiza-manao mahavelona
- famerana ireo orin’asa miverina miasa mba handray mpiasa vehivavy
- fanohanana sy fampitaovana arak’asa ny fikambanam-behivavy mpamokatra
Miangavy ny governementa mba hanokana vola misimisy kokoa amin’ny sehatry ny sosialy toy ny fampianarana, ny fahasalamana sy ny fanjarian-tsakafo mba hiatrehana ireo olana mianjady amin’ny vehivavy nateraky ny covid 19; indrindra koa mba hampiakarana ny teti-bola natokana ho an’ny minisitera miandraikitra ny vehivavy sy ny fampiroboroboana ny zony.
Atao mahenika bebe kokoa ny haraton’aina sy ny fiahiana ara-tsosialy, atao maimaim-poana ny fampidirana ny zaza an-tsekoly amin’ny ambaratonga fototra, fanamafisana ny fanentanana ny ankizivavy hanohy fianarana, hamafisina ny fanentanana sy fanabeazana amin’ny ady amin’ny herisetra sy ny, fanapariahana ireo fitaovan-tserasera mikasika izany, tokony hampitomboana ny ivon-toerana fihainoana ireo vehivavy iharan’ny herisetra, ary koa ho an’ireo lehilahy mpanao herisetra sy ny ivo-toerana fandraisana afaka mandray ireo vehivavy niharan’ny herisetra mandritra ny fotoana izay mbola ilàny fanohanana ara-tsaina sy fitsaboana indrindra koa ho an’ireo izay tena manana olana amin’ny toerana ialokalofany taorian’ny herisetra nahazo azy.
Ny mba hisian’ny ny fandraisana an-tanana maimaim-poana ny fikarakarana, ny fitoriana izay ataon’izy ireo sy fitsaboana maimaim-poana ireo vehivavy izay niharan’ny vono sy herisetra indrindra ireo mitondra takaitra noho izany ka ilàna fanaraha-maso manokana sy ny fanomezana azy ireo taratasy fanamarinana ara-pahasalamana.
Mangataka ny Cnfm ny mba hanendrena vehivavy ho goverinora amin’ireo faritra 5 tsy mbola misy goverinora voatendry dia ny Faritra Amoron’i Mania, Betsiboka, Bongolava, Ihorombe ary Melaky.
Hametraka vehivavy ho masoivoho amin’ireo toerana mbola tsy misy olona voatendry, hanohana ny fandraisan’ny vehivavy anjara amin’ny filatsahana ho fidiana amin’ny fifidianana rehetra ho avy.
Hanendry vehivavy no loholon’i Madagasikara.
Mikasika ny fanampiana ataon’ny mpamatsy vola
Mba hampangaraharana ny antontan-kevitra mikasika ny fanampiana ny vehivavy mba hisy ny fandrindrana ny fanampiana sy ny tohana mba hitovy daholo ny faritra rehetra amin’ny tetik’asa fampandrosoana ny vehivavy.
Mba ho tokana ny sehatra manao ny fandrindrana ny fanaraha-maso ireo tetik’asa rehetra misahana manokana ny vehivavy.
Fotodrafitrasa vaovao Md Kizito : Fitokanana ny Seminera Propedetika Provinsy Ekleziastika Atsimo Atsinanana - il y a 2 jours
Concours : Rédaction sur les Droits de l'enfant - il y a 3 jours